Iphangalele kwaye ifanelekile, i-3 bdr. ekhaya
Usapho lwakho luya konwabela eli gumbi lokulala eli-3 eliphangaleleyo elilungele usapho libamba isilayi esincinci sezulu kwimizuzu nje ukusuka kwi-Interstate 74. Zisa usapho lwakho, izihlobo, kunye nezilwanyana zasekhaya kunye ukuthuthuzeleka nazo zonke izinto eziluncedo zekhaya.
Umgama omfutshane wokuqhuba ukuya naphi na kwiidolophu zeQuad ezifana neKholeji yasePalmer, iDowntown Davenport, iKholeji yaseAugustana, iPaki yaseWoodmen yanamhlanje. Imizuzu nje eli-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMoline.
Ukungena kumnyango wangaphambili, uya kuhamba ungene kwigumbi lokuhlala elihle elivulekileyo elineetoni zokukhanya kwiifestile ezinkulu. Indawo enkulu yokuhlala, ilungele ukonwabisa okanye ukuhlala.
Onke amagumbi okulala abekwe kumgangatho we-2 ekhaya. Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo elikumgangatho ophezulu, kunye negumbi lokuhlambela elinesiqingatha elibekwe kumgangatho omkhulu.
4.46 ·Izimvo eziyi-13
4.46 · Izimvo eziyi-13
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Davenport